Tanora: Torohevitra 5 Hifehezana ny Hatezerana | Ho An’​ny Fianakaviana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Norvezianina Népali Oromo Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Novazavazaiko ny zokiko, sady natosiko ny varavarana ka nidona be tamin’ny rindrina. Isaky ny mahita ny dian’ilay izy aho, dia tadidiko hoe nanao sain-jaza be aho tamin’iny.”—Dina. *
“Nitabataba be aho hoe: ‘Ianareo koa tena dada tsisy ilana azy!’, dia nakaratoko ny varavarana. Hitako tamin’ny tarehiny anefa hoe nalahelo izy. Nanenina be aho! Raha azoko nofafana iny teniko iny, dia nofafako.”—Sambatra.
Efa nanao hoatran’i Dina sy Sambatra ve ianao? Hanampy anao ity lahatsoratra ity.
Lasa malaza ratsy ianao raha mora tezitra. Hoy i Naly, 21 taona: “Nieritreritra aho taloha fa tokony hanaiky fotsiny ny olona hoe hoatr’izany aho rehefa tezitra. Hitako anefa fa hoatran’ny adala ny fahitan’ny olona anao rehefa tsy voafehinao ny hatezeranao. Dia tonga saina aho hoe hay izany koa ny fiheveran’ny olona ahy!”
Hoy ny Baiboly: “Hanao zavatra amin-kadalana ny olona mora tezitra.”—Ohabolana 14:17.
Handosiran’ny olona, hoatran’ny volkano mipoaka, ianao raha tsy mahafehy tena rehefa tezitra
Handosiran’ny olona ianao raha mora misafoaka. Hoy i Riana, 18 taona: “Raha tezitra ianao ka tsy mahafehy tena, dia lasa tsy hajain’ny olona.” Hoy i Diary, 18 taona koa: “Tsy hanatona anao mihitsy ny olona raha mora tezitra ianao. Vao mainka aza ianao hatahoran’ny olona.”
Hoy ny Baiboly: “Aza minamana amin’ny olona mora tezitra, ary aza mifanerasera amin’ny olona mora misafoaka.”—Ohabolana 22:24.
Afaka miova ianao. Hoy i Tsiky, 15 taona: “Tsy miankina aminao indraindray ny zava-mitranga, ka mety ho tezitra ianao. Miankina aminao kosa anefa raha hifehy ny fahatezeranao ianao na tsia. Tsy voatery hoe hisafoaka be ianao.”
Ataovy tanjona ilay izy. Aza miteny hoe: “Ka izaho efa izany mihitsy.” Miezaha kosa hiova, ohatra hoe ao anatin’ny enim-bolana. Soraty izay mitranga ao anatin’izay fotoana izay. Isaky ny tezitra be ianao, dia soraty hoe: 1) Inona no nitranga?, 2) inona no nataonao?, 3) inona no heverinao fa tsara kokoa raha nataonao, ary nahoana? Miezaha hampihatra an’io hevitra fahatelo io, rehefa tezitra ianao amin’ny manaraka. Diniho koa ny ezaka efa vitanao. Isaky ny nahavita nifehy tena ianao dia soraty izay tsapanao, ohatra hoe faly na afa-po.—Toro lalan’ny Baiboly: Kolosianina 3:8.
Aza tonga dia mamaly. Rehefa misy olona na zavatra mahatezitra anao, dia aza tenenina avy hatrany izay tonga ao an-tsainao. Miandrasa kely aloha. Tsara koa indraindray ny misento lalina. Hoy i Tojo, 15 taona: “Manam-potoana kely hieritreretana aho, rehefa mba misento kely aloha. Amin’izay aho tsy mahateny na mahavita zavatra hanenenako.”—Toro lalan’ny Baiboly: Ohabolana 21:23.
Miezaha halala-tsaina. Tsy azonao indraindray ny tena zava-misy, satria izay zavatra mahatezitra anao ihany no hitanao. Diniho koa àry hoe inona no mety ho nahatonga an’ilay olona hiteny, na hanao zavatra nahatezitra anao. Hoy i Baliaka: “Na dia hoatran’ny masiaka na ratsy fanahy be aza ny olona sasany, dia matetika no misy antony ao. Ka raha fantatrao izay antony izay, dia mety tsy ho tezitra be aminy ianao.”—Toro lalan’ny Baiboly: Ohabolana 19:11.
Aleo miala kely, raha ilaina. Milaza ny Baiboly hoe: “Mialà dieny mbola tsy raikitra ny fifamaliana.” (Ohabolana 17:14) Aleo àry aloha mandeha, raha tsapanao hoe miakatra ny hatezeranao. Manaova zavatra manarinary dia, fa aza mieritreritra an’ilay izy intsony sao vao mainka ianao tezitra be. Hoy i Rebeka: “Tsapako hoe tonitony aho rehefa manao spaoro kely, ka voafehiko ny hatezerako.”
Miezaha hanadino an’ilay izy fotsiny. “Tezera fa aza manota”, hoy ny Baiboly, ary ‘tazòny ao am-ponao ihany ny teninao, ka aoka ianao hangina.’ (Salamo 4:4) Tsy diso àry ianao raha tezitra. Izay hataonao aorian’izay no zava-dehibe. Hoy i Sanda: “Raha avelanao hampisafoaka anao ny zavatra ataon’ny olona, dia ry zareo no avelanao hibaiko anao. Maninona anefa raha hadinoina any fotsiny ilay izy e? Matotra kokoa ianao raha manao an’izany.” Ho voafehinao ny hatezeranao amin’izay, fa tsy ianao indray no feheziny.
“Esory aminareo mihitsy ireto rehetra ireto: Fahatezerana, fahavinirana, faharatsiana, fanevatevana.”—Kolosianina 3:8.
“Miaro ny tenany tsy hahita fahoriana ny olona mitandrina ny teny aloaky ny vavany.”—Ohabolana 21:23.
“Mihinàna sakafo mahasalama, dia mazotoa misotro rano. Hitako hoe tsy mora tezitra aho raha mitandrina ny sakafo hohaniko.”
“Raha mianatra mifehy tena ianao rehefa tezitra, dia mihamatotra fa tsy manao sain-jaza intsony. Ny ankizy mantsy mila vaniny sy be famaliana foana, fa ny olon-dehibe kosa mahay miresaka milamina.”
Inona no Hanampy Anao Hanam-paharetana?
Dingana efatra hanampy anao hanam-paharetana.
Hizara Hizara Mahaiza Mifehy Tena Rehefa Tezitra